Umsayino Ikofu & nebhedi 1st
Esi sakhiwo sithandekayo sikummandla weChang Klan, kumbindi wesixeko saseChiang Mai.
Ukufikelela ngokupheleleyo kwi-Intanethi ye-Speed High, ukuya kwi-Roof Top. Ukuhamba umgama ukuya kwi-Night Bazaar, 7/11, iiVenkile zokutya kunye neendawo zokutyela ezininzi ezimangalisayo, iiVenkile zeKofu kunye nesiXeko esiDala esidumileyo zikumgama wokuhamba. ISikhululo seenqwelomoya siqikelelwa kumgama oyi-6km kwaye siyakuthatha malunga ne-10-15min kusalindwe ukuba izithuthi zifike.
Sikholelwa ukuba iinkcukacha zibalulekile. Kunomoya kwigumbi ngalinye, izinto zangasese, isixhobo sokomisa iinwele, indawo yokubeka impahla, isitebhisi, iti/ ikofu/iswekile. Indawo yethu ikunika yonke into oya kuyidinga ukuze wenze amava eChiang Mai angalibalekiyo.
Yakha i164/49 Ivenkile yekofu eGround Kumgangatho we-2 kunye ne-3rh Bedroom, kukho i-2 ukumkani ubukhulu, ibhedi yeSofa kwigumbi ngoko ilungele abantu aba-5. Le Yunithi ifaneleke kakhulu kwiiNtsapho ezinabantwana okanye abahlobo abahamba kunye.
Ifakwe ngokupheleleyo kunye ne-Functioning Hair Dryer, i-Intanethi ye-Speed High Speed (free), i-Balcony, i-Digital TV. Inkonzo yokuthatha nokubeka impahla yokuhlamba iyafumaneka kwidesika engaphambili ngexabiso elifanelekileyo. IiNdwendwe eziKhokelwayo kunye neeHambo zinokunikezelwa kwaye ulwazi luya kufumaneka kwigumbi. Isakhiwo ngokwaso sibonisa ukungena okukhuselekileyo, umnyango we-elevator kunye ne-elevator ngokwayo isebenzisa i-keycard, iikhamera ze-CCTV.
Hamba uye kwi-Night Bazaar kunye nayo yonke into ephakathi kwedolophu yaseChiang Mai kufuneka ibonelele; kuquka amanyathelo ukuya 7-11 evenkileni. Umntwana onobubele, ulala 5 kwaye unayo yonke into oyifunayo ubungakanani bebhedi. Kumnyango osecaleni kweShangri La kunye nemizuzu eli-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, kwisikhululo sikaloliwe okanye kwindawo yokugcina iibhasi. Ngethemba lokudlala indima encinci kumava akhumbulekayo eChiang Mai.
Ndinganikezela ngeengcebiso zangaphakathi (ezibonelelwe ngemephu) kwiindawo zokundwendwela, iindawo zokutyela ezintle, iivenkile zekofu ezintle kunye nemivalo. Iindawo apho abakhenkethi ngokuqhelekileyo bebengenakukwazi nalapho abantu basekuhlaleni bathanda ukuhlala khona.
Ndinganikezela ngeempendulo ezikhawulezayo ngemiyalezo okanye ngeposi, ukunceda kwaye ndincede undwendwe lwam luqinisekise ukuba lunexesha elimnandi eChiang mai.
Ndinganikezela ngeengcebiso zangaphakathi (ezibonelelwe ngemephu) kwiindawo zokundwendwela, iindawo zokutyela ezintle, iivenkile zekofu ezintle kunye nemivalo. Iindawo apho abakhen…